Service - Hebei Impahla Co., Ltd
Umqondo isevisi yethu DESIGN, QUALITY UKWENZA, 24HOURS UXHASO. nesipiliyoni anqwabelene, tisebenti leticeceshiwe kanye nekghono eliphezulu kuyisisekelo futhi isiqinisekiso inkonzo yethu iIgama egcwele.
Asikwazi ukwakha izikhwama ngokuvumelana wekhasimende imfuneko nokusetshenziswa imvelo kanye ezinye izinjongo ethile.
Ikhwalithi eyamukelekile - Ngokusekelwe isipiliyoni sethu njalo zanqwabelana futhi umkhiqizo ngokuya athuthukile, singakwazi akhiqize izikhwama cishe yonke namazinga izinga njengoba ASTM, ISO, kanye UN, njll,
Quality Control System - Sine ephelele ukulawula izinga uhlelo ukuze siqinisekise imikhiqizo yethu ukwanelisa imfuneko sakho. Lolu hlelo kulandela futhi ilawula yonke inkambo ukukhiqizwa, uthola amaphutha kungenzeka usombulule lezi zinkinga ngesikhathi. Liqinisekisa ukuthi zonke isixhumanisi ku uchungechunge production ithobelana ne isidingo izikhwama isiqedile.
Quality Test nokuhlolwa - Thina akhiqize izikhwama futhi ulawule izinga ngokuhambisana standard ikhasimende angadingeki. abasebenzi bethu okuthembekile professional ngabe ukuhlola umkhiqizo nsuku zonke ngesikhathi zonke isixhumanisi ukhiye yenqubo ukukhiqizwa futhi avivinye izikhwama siphelile ukwanelisa iindingo zakho. Ngaphezu kwalokho, bonke yamasaka ethu angenza isicelo ukuhlolwa e-labs professional Melika, eYurophu nase-Australia ngenxa yesicelo sakho.
amahora angu-24 LIVE CHAT UXHASO
Sithanda ukugcina wengxoxo bukhoma usuku lonke, iyokhishwa uphendule yimiphi imibuzo yakho.
UMnyango wethu Sales athembisa ukuphendula emahoreni angu-24 kuze kube umbuzo owaba umqansa kunayo yonke.
UMnyango wethu Production ngeke kahle ukuxazulula kungenzeka umbuzo lobuchwepheshe ekukhiqizeni futhi yabe izikhwama ukwaneliseka kwakho ngesikhathi esihle.
UMnyango wethu Operation Ngiyonika iseluleko enemininingwane kwezimpahla ezithunyelwa emahoreni angu-24 futhi iyokhishwa axazulule izixazululo ezifanele zemibuzo ezokuthutha ahlobene.